2012 Yamaha YZ 250F – Used 2012 YZ 250 F at Motorcyclist Magazine | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36090)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11216)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9931)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9631)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9022)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8676)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8266)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7345)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7302)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7291)
Yamaha ထုတ်လုပ်မှု Tesseract ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်? RideA ... (6678)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, ဆန်းစစ်ခြင်း, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6314)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5889)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5859)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5546)
Home → Yamaha → 2012 Yamaha YZ 250F – Used 2012 YZ 250 F at Motorcyclist Magazine
2012 Yamaha YZ 250F – Used 2012 YZ 250 F at Motorcyclist Magazine
4 ဇန်နဝါရီ 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 Yamaha YZ 250F – Used 2012 YZ 250 F at Motorcyclist Magazine
2012 YZ 250F
Yamaha’s motocross line, the YZ line, consists of the YZ85, 125, 250, 250F, and 450F. The “F” signifies the four-stroke engines, and the remainder and tried and true motocross two-strokes.
Originally released in the mid 1970’s, Yamaha’s pure dirt machines haveawell-known pedigree of durability and performance in the rough and tumble world of motocross. Yamaha’s commitment to dirt racing was evident throughout the 1980’s and 1990’s and led to the development of the first mass-produced four-stroke motocross machine, the YZ400F, တွင် 1998. ဘို့ 2012, all of Yamaha’s YZ two-stroke line (YZ85, 125, နှင့် 250) are carryovers from 2011, but both of the four-strokes (YZ250F and 450F) are upgraded for 2012.
အဆိုပါ 2012 Yamaha YZ250F and YZ450F are available in Team Yamaha Blue/White or White/Red and both retain the straight-up motocross styling that isaresult of function more than anything else. With fully-adjustable handlebars,along seat for easy movement during braking and acceleration, and well-placed foot controls, the YZ line is built for speed on the dirt.
Considered by many to have the most reliable motors in their classes, the Yamaha four-strokes have great low end power and easy revving up to the high end,atestament to Yamaha’s years of engine development. Because they are carbureted versus fuel injected like their competition, the Yamaha four-strokes are lighter than most bikes in their class, and thus more maneuverable in the ever-changing conditions of motocross. Handling is also excellent because of aggressive mass centralization by Yamaha engineers, putting as much of the bike’s weight as possible in the mid-point of the motorcycle.
Not unlike liter sportbikes on the street, the most hotly-contested segment of the motocross market is the four-stroke 250cc motorcycle. Yamaha was the first to produce one, and riders looking for an exciting and reliable machine to take to the track or just out free-riding should look no further.
All Yamaha two-stroke models for 2012 are unchanged from their 2011 predecessors.
The four-stroke models, သို့သော်, have both received new mufflers designed to meet 94 dB standards, improved front and rear suspension settings and valving for smoother suspension performance, have acquired new seat foam material, and offer two color options (Team Yamaha Blue/White or White/Red) which both feature rich-looking black rims andagold-color drive chain.
To increase throttle response in the mid-to-high speed range, subtle engine refinements likealarger carburetor, improved spark plug firing through optimized Capacitor Discharge Ignition (CDI) mapping, andalighter piston give the 2012 YZ250F more power and improved power delivery.
The air cleaner cage isanew design that increases airflow which contributes to the improved throttle response in the mid- to high-speed range.
A Bilateral Beam frame witharefined balance of three-dimensional rigidity is used for improved cornering performance and better stability on rough, high-speed straights.
Increased diameters on the outer fork tubes and triple clamps result in increased front end stiffness and stability.
Fork trail has been increased in 2012 which contributes to excellent straight-line stability and reduces the tendency of the front fork assembly to resist changing direction.
Revised fuel injection settings (mapping for injection and advance) offer smooth, controllable engine response in the low-to-mid-rpm range.
ECU programming is updated to optimize performance characteristics with the new-spec muffler
2014 Kawasaki Ninja 1000 ABS Specs, Review and Price 2013 2014 မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
2009 Yamaha YZF-M1 – MotoGP Review performance picture comparison news
2008 Yamaha YZF-R15 motorcycle review @ Top Speed
1989 Yamaha 350 TT Specs eHow
Yamaha’s Gen-Ryu hybrid concept bike to boggle your mind Gadget Reviews
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha C3 – ပိုင်ရှင်မော်တော် Scooter လမ်းညွှန် Reviews
Yamaha စူပါ Tenere Worldcrosser – Ultimate ...
20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha စူပါ Tenere Worldcrosser – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Yamaha XJ6 မတူကွဲပြားခြင်း – an all rounder for th...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha XJ6 မတူကွဲပြားခြင်း – လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးကို rounder? MIND မှ…
Yamaha က X-မက်စ် 250 စမ်းသပ်
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha က X-မက်စ် 250 စမ်းသပ်
Yamaha လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်လာ – ခုနှစ်တွင် ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်လာ – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
မော်တော်ဆိုင်ကယ်: Yamaha စကူတာ 2012 Majesty pictures an...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်: Yamaha စကူတာ 2012 တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုသတ်မှတ်ချက်များအတွက်…
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha C3 – performance Loobin Upgrade’ ပြွန်
Yamaha FZS1000 Do (2000-2005) Motorbike Review ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Yamaha FZS1000 Do (2000-2005) မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း MCN သို့
ဆန်းစစ်ခြင်း: Aprilia Dorsoduro 750 မျိုးစုံလူတစ်ဦးနှင့်အတူဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – ပွင့်လင်း ...
Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
2009 Aprilia Mana 850 GT ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန် MotorCyclin ...
2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 Motorc မှာ ...
Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ်
WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲ S ကိုခိုးယူ ...
Aprilia Tuono V4 R ကို APRC အပေါ်လျင်မြန်စွာစီး – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ် ...
Aprilia Dorsoduro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Hypermotard Killer? –...
Ducati 60 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Bajaj Discover ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဆူဇူကီး Colleda CO Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ER-6n စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး AN 650 ဟွန်ဒါ DN-01 Brammo Enertia တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Desmosedici GP11 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စမတ် eScooter Aprilia Mana 850 Ducati Diavel
Yamaha C3 – ပိုင်ရှင်မော်တော် Scooter လမ်းညွှန် Reviews
Yamaha စူပါ Tenere Worldcrosser – အဆုံးစွန် MotorCycli ...
Yamaha XJ6 မတူကွဲပြားခြင်း – လာမယ့်ဒီဇင်ဘာအတှကျအားလုံး rounder ...
Yamaha လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးကွက်ဝင်ရောက်လာ – အဆုံးစွန်မို ...
မော်တော်ဆိုင်ကယ်: Yamaha စကူတာ 2012 တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတိကျတဲ့ ...
Yamaha C3 – performance Loobin Upgrade’ အဆိုပါ Tube ...
Yamaha FZS1000 Do (2000-2005) မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း MCN သို့
Yamaha YZF-R125 ဆိုင်ကယ် – စျေးနှုန်းများ, reviews, ဓာတ်ပုံများ, မိုင်အကွာအဝေး ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
စနေနေ့ | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
စနေနေ့ | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
စနေနေ့ | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
ကိုယ့်တစ်ဦးကဒ်များအတွက် HL-173a tillotson carb များအတွက်ကိရိယာအစုံ RK-117hl ပြန်ဆောက်ဝယ်ယူ $4.49 အရာဆံ့ ...
hi သင်သည်ရောင်းချဘို့ဤရှိသည် Do သို့မဟုတ်?...
စာရေးသူ Jens Fischer.
မင်္ဂလာပါအမေတစ်ဦးရှိ 1984 locatea ကို manual သို့မဟုတ် t ကို၏နောက်ကျောအပေါ်ဝါယာကြိုးထဲကအနည်းဆုံးတစ်ဦးထားမှ andtrying sst ...
တရားဝင်ကုလသမဂ္ဂ-တရားဝင် ROKON မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာ
Schebler Deluxe DLX 108 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Carburetor ခန္ဓာကိုယ် (12/29/2011)…
Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်
ဟာ Off comments အပေါ် Ducati Monster 696 အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲရောင်းအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်
တစ်ဦး Harley rocker ECM eHow Install လုပ်နည်း
ဟာ Off comments အပေါ် တစ်ဦး Harley rocker ECM eHow Install လုပ်နည်း
KTM 450 မှဆန္ဒပြပွဲပုံတူရှိနိုင် ...
KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်လာမယ့်ပါလိမ့်မည်လျှင်မူကားကမရှင်းလင်းမယ့် ...
ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX တစ်ဦး ...
ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX အသစ်ကစက်ဘီးရာသီအပြည့်အဝလွှဲချဉ်းကပ်အဖြစ်, စီးနင်း၏ TWMX စမ်းသပ်ခြင်းန်ထမ်းများရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်နေ့ကသုံးစွဲခဲ့ ...
KTM 350 နှင့် 450 SX-F ကို – အစဉ်အဆက် ...
နယူးအလို့ငှာ Todd ရိဒ်အားဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း. ခရစ် Pickett အားဖြင့် pics အလုံးစုံသစ်ကို KTM 350SX-F ၏လွှတ်ပေးရေးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခဲ့သည်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပွင့်လင်းလူတန်းစားဖြစ်ပါတယ် ...
2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း –
ကိုယ့်အဆုံးစွန်သစ်တောပြိုင်ကားသမားထက်ပို ဒန်ပဲရစ်အားဖြင့်ဓါတ်ပုံများ off-လမ်းပြိုင်ကားအခုအချိန်မှာကြီးမားဖြစ်ပါသည်, cross-တိုင်းပြည်နှင့် Endurocross-ပြိုင်ကားသို့ moto မီဒီယာနဲ့ပေါက် ...
KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990...
KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင်စွန့်စားမှုဘာဟာ & Models KTM များအတွက်နှစ်ဦးက New Street, & Models ကြေညာ 2013 Murrieta, , CA KTM မြောက်အမေရိက, ...
စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, Servicin ...
အဆိုပါကမ္ဘာအများဆုံးစွယ်စုံခရီးသွားအန်ဒူရို စတင်ချိန် မှစ. ညာဘက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအပြိုင်အဆိုင်ကနေအသိပညာ၏အလျှော့လွှဲပြောင်းကြောင်းရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ် ...
KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! ...
KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! ရှင်းရှင်းလင်းလင်း KTM Duke ပလက်ဖောင်းပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး supermotard ၏ဤပုံရိပ်တစ်ခုဥရောပ KTM ဖိုရမ်အပေါ်ပေါ်ထွန်း. KTM CEO ဖြစ်သူ Stefan ...
2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို- ...
2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို - စီးရလဒ်ပြသမှုတစ်ဦးက Dungey ပုံတူ, KTM ရဲ့ Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ 450. ဓာတ်ပုံဆရာ. ဂျက်ဖ်အယ်လန် ကီဗင်ကင်မရွန်တတျနိုငျသ ...
2009 KTM 990 ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ T ကမော်တော်ဆိုင်ကယ် ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: နိဒါန်း ငါတို့သည်သူတို့ပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အထင်ကြီးစရာအလုပ်အားဖြင့်သာအံ့သြနိုင်ပါတယ်, အခြေခံကျကျဟာပြောင်းလဲမသာ 990 ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ ...
စမ်းသပ်ခြင်း KTM Duke 690 2012: ဆိုးဆိုးရွားရွားမို ...
စမ်းသပ်ခြင်း KTM Duke 690 2012: ဆိုးဆိုးရွားရွား Mono အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု ဇူလိုင်လ 7, 2012 | အောက်မှာ Filed: KTM | Posted by ကို: Rao က Ashraf အဆိုပါ KTM Duke 690 အတွင်းသိသိသာသာတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာ 2012. ...
Moto Morini Kanguro နှင့် Dart – ဂန္ထဝင်မော်တော်ဆိုင်ကယ် Roadtest – RealClassic.co.uk
KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
2013 သင်္ဘော MV Agusta F3 ပထမဦးစွာစီးနင် – Tampa ဂလားပင်လယ်အော်၏ယူရို Cycle
Moto Giro Vintage မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဆန်းစစ်ခြင်း: Aprilia Dorsoduro 750 မျိုးစုံစရိုက်နဲ့စက်ဘီးဖြစ်ပါတယ်…
Blata mini ကို Moto
Ducati Monster S4 ကိုဝိုးတဝါး
2010 Kawasaki လားနှင့် Teryx lineup ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
ပထမဦးဆုံးအစှဲ: Ducati Monster 696, ဧရာမသတ္တဝါကြီး 1100, အားကစားဆိုင်ရာဂန္ထဝင်အားကစား…
Bajaj သေစားသေစေသော 220cc ပြန်လည်သုံးသပ်
Kawasaki: Kawasaki နှင့်အတူ 1000 kavasaki z 400
1969 BSA 441 ဗစ်တာအထူး – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
1991 ဘီအမ်ဒဗလျူ 850 V126မြန်နှုန်းမူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာ
သင်္ဘော MV Agusta F4 1000 S က – လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်း & ဆန်းစစ်ခြင်း – ဆိုငျကယျသမားအွန်လိုင်း
1939 အိန္ဒိယ Scout ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်အမေရိကန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX – Transworld Motocross
Drysdale 2x2x2- 2WD ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဟွန်ဒါ CBR 600RR 2009 ကို C-ကို ABS ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 280km / h Make ရန်ကဘယ်လို & အရာအားလုံးလုပ်ပါ!
2014 Ducati 1199 Superleggera ‘ သင်ကမေးပါမှဖူးခဲ့လျှင်, သငျသညျမရနိုင်သလား…
Moto Guzzi V7 Classic (2010) ပြန်လည်သုံးသပ်
2005 ဟွန်ဒါ Silverwing သတ်မှတ်ချက်များ eHow
Repsol ဟွန်ဒါ – ဗီဒီယိုကိုစွယ်စုံကျမ်း
2007 Kawasaki Z ကို 750 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer
Ducati 10981198 အဆိုပါအထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်
Hyosung 250 ကြယ်တံခွန်များနှင့်အာကုလနယူးဇီလန် 2003 ဆန်းစစ်ခြင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ် Trader နယူးဇီလန်
အဆိုပါ 2009 Harley Davidson လမ်းမကြီးမှာဘုရငျ – Yahoo ကအသံများ – voices.yahoo.com
2013 Benelli လေဆင်နှာမောင်းအဝတ်အချည်းစည်း TRE1130R Specification, စျေးနှုန်းနှင့်ရုပ်ပုံ …
2013 ဆူဇူကီး Burgman 400 ထိပ်တန်းနယူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်
Yamaha စူပါ Tenere Worldcrosser – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ထိပ်တန်း 10 Motorcyles တစ်ဦးက Man wow Tech မှသတ်မှတ်ချက်များဆင့်ဆိုရမည်မှာ Make, reviews, သတင်း, စျေးနှုန်း…
အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – Aprilia ပြန်လည်သုံးသပ်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
KTM 350 နှင့် 450 SX-F ကို – သံသရာ torque မဂ္ဂဇင်း
မိသားစုဆရာဝန်ရဲ့ဂန္ထဝင်သံမဏိ #63: 2005 ဆူဇူကီး RM250 PulpMX
1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
အဆိုပါ GSResources – Stator သတင်းစာများကငါ – စနစ်များကိုအားသွင်း GS အပေါ်တစ်ဦးက primer
Bajaj Discover 150 DTS-i: 2010 နယူးဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်ကို Preview
Laverda SFC 750 မော်တော်ဆိုင်ကယ် Diecast မော်ဒယ် IXO အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲကို eBay
သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 အောက်မှာ $ 7500 ဘို့သုည DS နှင့်သုည S က…
Ducati ဖိလစ်ပိုင် Diavel Cruiser လွှတ်တင် – သတင်း
ဒီ site အကြောင်း
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့် discusssions.
© 2019. သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions